एमालेलाई हुकुमी सनकमा चलाउँदै ओली - UjyaloNepal
२०७८ श्रावण ८ गते, शुक्रबार प्रकाशित
एमालेलाई हुकुमी सनकमा चलाउँदै ओली
काठमाडौं- यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई आममाफी दिने घोषणाबारे व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले माधव पक्षलाई ‘विगतका गल्ती भुलेर आए आममाफी दिन्छु’ भनेर घोषणा गरेका थिए । ओलीको यो घोषणाले एमाले कस्तो सनकको भरमा चलेको पार्टी रहेछ भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
पार्टी सञ्चालन एउटा विधि र पद्धतिका आधारमा चल्छ । यसका आफ्नै मूल्य मान्यता हुन्छ ।
तर, ओलीले एमालेलाई सनक र लहडका भरमा चलाइरहेका छन् । बालुवाटारबाट हट्नुपर्दाको आक्रोश उनले बालकोटको बार्दलीमा उभिएर व्यक्त गरे ।
उनले आफ्नो पार्टीको सरकार हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माधव नेपाल गद्दार भएको घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले उनी माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार भएको, आममाफी दिन तयार भएको बताउन थालेका छन् ।
ओली यो हदसम्म यु टर्न किन भए ? अहिले यसको कारण खोजी भइरहेको छ । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भने ओलीले सनककै भरमा चलाउन थाल्दा पार्टी तहसनहस भइसकेको छ ।
पार्टीमा यतिसम्मको अराजकता बढेको छ कि खुलेआम पार्टी अध्यक्षमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । पार्टीकै नेताहरूले ओलीलाई तल्लोस्तरको गालीगलौज गर्न थालेका छन् ।
यसको दोषी ओली नै हुन् । किनभने आफू पक्षधरलाई च्पाप्ने र विरोधीलाई भित्तामा पुर्याउने काम ओलीले गर्दै आएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी एउटा सिस्टममा चलेको हुन्छ ।
सर्वहारा र मजदुर तथा गरिबको पार्टी भनिन्छ । तर, एमाले अहिले सामन्तवादी पार्टीमा रुपान्तरण भइसकेको छ । त्यही भएकाले ओलीले क्षणभरमै गद्दार घोषणा गर्ने र क्षणभरमै आममाफी दिने भन्दै आफूलाई महाराज सम्झेका छन् भने माधव पक्षलाई दास सम्झेका छन् ।
सामन्ती राजाहरुले मात्र दासहरूलाई माफी दिन्थे । ओलीले एमालेलाई त्यही अवस्थामा पुर्याएका छन् ।- मिडिया डबलीबाट
कान्तिपुर मिडिया पब्लिक कम्पनी बन्यो, आईपीओ कहिले ?
मोलुङ हाइड्रोपावरले ३५ करोड ३१ लाखको आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारिमा
माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र प्रचण्डको भेट, छलफलको बिषय के ?
ओलीको पछि लाग्ने सबैको बिल्लीबाठ, क–कसको भविष्य दाउमा ?